Archive du 20180726
Paul Rabary “Tsy hahavaha ny olan’ny fanabeazana ity fitondrana ity”
Nivoaka tamin’ny fahanginany omaly ny minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary manoloana ny fialany tsy ho mpikambana ao anatin’ny antoko HVM intsony. Nambarany fa fampifangaroana ny asam-panjakana sy ny politika no antony.
Hetsika tetsy amin’ny 13 mey Fahombiazana ireny, hoy ireo nitari-tolona
Tsy ny Parvis irery akory no atao hoe kianjan’ny 13 mey, hoy ry zareo avy eo anivon’ny antoko Tambatra.
Solonandrasana Mahafaly Hisintaka amin’ny HVM ihany koa ?
Tsy re feo firy intsony ny praiminisitra teo aloha Mahafaly Solonandrasana Olivier taorian’ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny praiminisitra ankehitriny. Tsaroana tsara kosa ny teny nataony tamin’izay ka nilazany hoe: “mametraka ny mandrapihaona vetivety” ny 6 jona lasa teo.
Vondron’Olon-Tsotra « Avoahay aloha ny tantara ! »
Samy ilain’ny Malagasy daholo, hoy ny filohan’ny Vondron’Olon-tsotra (VOT), Sarah Zoe, na ny fanorenana ifotony na ny fifidianana saingy mila hay ny mametraka ny laharam-pahamehana sao zava-doza no hitranga.
Fitakiana sy fitokonana Hihenjana sy hampiasa hery indray ny fanjakana
Miverina ny fandrangarangana hery sy famoretana ataon’ny fanjakana eo anatrehan’ny fitakiana sy fitokonana samihafa mbola misy eto amin’ny firenena amin’izao fotoana.
Asan’ny “médiateur” Tsy fantatry ny ankamaroan’ny Malagasy
Nahavita ny tatitra momba ny asa nataony ny taona 2017 ireo mpiahy ara-drariny (médiateur). Sampandraharaham-panjakana najoro araka ny didy hitsivolana mitondra ny laharana 92-012 tamin’ny 29 aprily 1992 ary manana andraikitra ny amin’ny fiarovana ny zon’ny isam-batan’olona ny mpiahy ara-drariny.
Antananarivo Avaradrano Nahazo fotodrafitr’asa vaovao 5
Mila mifanome tanana isika mba hahafahana manaisotra ny firenena amin’ny krizy niainana nandritra ny 50 taona, hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fitokanana ireo fotodrafitrasa fototra miisa 5 teny amin’ny distrikan’Antananarivo Avaradrano omaly.
Tsenan’Ambohidahy Ankadindramamy Nodiovina sy notondrahan’ny CUA fanafody
Tsy mikely soroka amin’ny asa fanadiovana sy fandaminana ny tanàna ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Paikady amin’ny aroloza sy fampandrosoana Mila arindra tsara
Notanterahana tetsy amin’ny hotely Panorama Andrainarivo ny atrikasa nanamafisana ny fomba fiasa avy amin’ny fitondrana malagasy hanatsarana ny fisorohana sy fiatrehana ny loza any atsimon’ny nosy.
Basket Africa Cup Qualifiers – Madagascar Vonona tanteraka izy 12 mianadahy Malagasy
4 andro mialoha ny hiatrehana ny lalao basikety Africa Cup Qualifiers etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, hahazoana hiatrika ny famaranana hatao any Lomé Togo amin’ny novambra 2018, ho an’ny vondrona A misy an’i Madagasikara mpampiantrano ka handraisana vahiny Afrikanina toa an’i Egypte, Ouganda, Rdc, Seychelles,
Krizin’ny fampianarana Mifampizirizy ny fanjakana sy ny mpanabe
Miverina tsikelikely ny fampianarana manerana ny Faritra maro eto Madagasikara, anisany ny eto Antananarivo Renivohitra, hoy ny vaovao navoakan’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena izay nahely tamin’ny tambajotram-pifandraisana, indrindra tamin’ny haino aman-jery, toy ny haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM.
Oniverisiten’Antananarivo Hikatso ny fampianarana manomboka anio
Tontosa omaly alakamisy 25 jolay tao amin’ny Amphi 24, FLSH Ankatso ny fivoriamben’ny Sendikan’ny mpampianatra mpikaroka na ny SECES Antananarivo, niresahana ny vokatry ny fifampidinihana tamin’ny tompon’andraiki-panjakana sy ny tohin’ny fitakiana.
Sorona isaky ny hanao zavatra Misy tandindona lazainy, hoy ny manampahaizana
Ny firenena tsirairay avy, hoy ny manampahaizana momba ny fomba malagasy, Eddy Jean Philippe sady filoha lefitry ny fikambanana Tandroharena, dia samy manana ny fomba amam-panao mampiavaka azy avokoa.
Sisin-dranomasin’i Madagasikara Tsy voafehy ny fiarovana azy
Mivelatra sady midadasika ny fari-dranomasina Malagasy satria avo telo heny mihoatra ny velaran-tanin`i Madagasiakra. Antony tsy hahafehezana ny fifindra-monina sy ny fanondranana an-tsokosoko ny fidadasiny. Olana goavana ny tsy fahampian`ny fitaovana anatanterahana ny asa na efa nanomboka manampy amin`ny fampitaovana aza ny fanjakana.